Venezoela: ireo mpampiasa Twitter, mpitoraka blaogy ary ireo mpikambana amina forum ao ambany mason’ny fitsaràna. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2010 19:04 GMT
Ny tantara lavan'ireo fitsabahana amin'ireo banky any Venezuela [EN], dia nitarika tsaho marobe tsy azo nosorohana momba ny hoe banky iza indray no hiharan'ny fitsabahana ato ho ato. Ny Banky Federaly, niharany ny herinandro lasa teo, dia banky faha-roa ambinifolo nitsabahan'ny Governemanta nanomboka ny volana Novambra 2009.
Na dia efa fantatra aza fa ny zo dia mitarika andraikitra, dia maro ireo mpampiasa no mampiseho ny tsy fiombonan'izy ireo hevitra amin'ilay fanambarana, indrindra noho ny vokany amin'ny fitondrantena amin'ny aterineto, ateraky ny tahotra. Tsy maintsy ampahatsiahivintsika fa ireo fandrahonana fahiny nataon'i[ES] Chavez tamin'ireo mpitoraka blaogy izay mamoaka vaovao mikasika ny fivarotana antsokosoko ny vola dollar any Venezoela, dia nitarika ny fanakatonan-tena ho an'ireo blaogy malaza maro nitatitra izany tao amin'ny firenena. Na eo aza anefa izany, dia misendaotra noho ity fepetra ity ny tontolon'ny twitter venezoeliana:
Raha izao hita izao, dia tsy ilay lalàna amin'ny maha-lalàna azy loatra no mandranitra ireo mpitoraka twitter sy mpitoraka blaogy, fa ny fisafidianana izay ho endri-pitondrantena ataon'ny Governemanta laza masaka fa hampiharina, ary izay midika fa tato ho ato, dia mbola ambony noho ny hanoanana, fahantrana sy ny tsy fandriampahalemana ny fitondrantenan'ny olona eo anivon'ny aterineto. Na dia eo aza izany, dia mety ho fotoana izao hampahatsiahivana fa maro ireo tranonkala, toy ny Noticiero Digital, no mametraka politika momba ny fanakanana ao amin'ny forum -n'izy ireo izay mpampiasa aterineto miresaka mikasika ireo tsaho momba ny banky [ES].
Kanefa, tsy izao no fotoana voalohany nitrangana trangan-javatra tahaka izao. Tamin'ny taona lasa, tany Goatemala, dia nisy olona iray nosamborina noho izy nitarika “fisavoritahana momba ny hetra [ES]“, ary tany Seúl, mpitoraka blaogy iray hafa ihany koa no voatana an-tranomaizina noho ny fanaparitahana tsaho mikasika ny fitatanam-bola [ES].